Regime – တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၅၉ ဦး ရာထူးမြင့်သူများဖြင့် အစားထိုး | MoeMaKa Burmese News & Media
ယခုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်သူများထဲတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့် ၈ ဦး ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့် ၁၄ ဦး နှင့် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့် ၃၇ ဦးတို့ ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရကာ လက်ရှိ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထက် ရာထူးမြင့်မားသူ ဆယ်ဂဏန်းနှင့်ချီ ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များထဲတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့်ရှိသူ ၁ ဦးသာရှိနေခဲ့ရာမှ ယခု ၈ဦးထပ်မံ ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်ကြာ စစ်တပ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုခံခဲ့ရသည့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ယခုလဆန်းတွင်ကျင်းပသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၄၃ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး
လွှတ်တော်ထဲ ပါဝင်လာတော့မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းကျိန်မည့် စာသားတွင် အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည် ဆိုသည့်စာသားကို ပြင်ဆင်ပေးရန် အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှ တင်ပြထားရာ ၎င်းတို့၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ယနေ့ပြန်လည်စတင်မည့် လွှတ်တော်သို့
တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ။
3 Responses to Regime – တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၅၉ ဦး ရာထူးမြင့်သူများဖြင့် အစားထိုး
ပြည်သူ့အသည်းနှလုံး on April 23, 2012 at 10:53 am
…..ရာထူးဂုဏ်သိမ်မြင့်မားပြီး အကျင်. သီလ သိက္ခာမရှိယင်တော.?.?..?… တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက်ရယ်လို့ ရည်ရွယ်ယင်တော. (အမှန်တကယ်အရည်အချင်းရှိယင်) အားလုံးကိုကြိူဆိုပါတယ်… လူတစ်စုကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုယင်တော.?..?..?တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိူးဖွံ့ဖြိူးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘယ်သူတွေဘယ်လောက် အရည်အချင်းအစွမ်းအစရှိလဲ ပြိုင်ကြစမ်းပါဗျာ…
Military operations* on April 23, 2012 at 5:38 pm
Military operation-Arakan plan to Rohinger’s father ( Bangladesh) –failed..
Military operation-plan A to gunless widow party begins..
Nai Kyaw Sein on April 24, 2012 at 12:17 am
ယခုလွှတ်တော်ထဲ အဆင့်မြင့်တဲ့ စစ်သားတွေ ရွေးကောက်စ၇ာမလိုဘဲ ၀င်လာတယ် ယခု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစတင်ခဲ့တဲ့ ဗမာစစ်သားတွေ တိုင်းပြည်နဲ.ပြည်သူအကျိုးကိုကာကွယ်မှာလား အာဏာရှင်အလိုကျေ၇းဆွဲခဲ့တဲ့ ဥပဒေနဲ.အာဏာရှင်နောက်လိုက်စစ်ဘီလူးဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဆက်ပြီးကာကွယ်မှာလား စစ်ဘီလူးအုပ်စုကိုဆက်ပြီးကာကွယ်မယ်ဆို၇င် ပြည်ချစ်ဗမာ့တပ်မတော်တ၇ပ် ပြန်လည်ဖွဲ.စည်းဖို.လိုအပ်ပြီ။